डियर मन » देशपाटी
भनिन्छ, मनको कुरा शेयर गरेपछि मन हलुको हुन्छ । एक प्रकारको छुट्टै आनन्द पनि मिल्छ । आज धेरै समयपछि केही लेख्ने जाँगर आएको आएको छ । लेख्छु भनेर तयार पनि भए । तर के लेखौँ सोच्दैछु, ठ्याकै मसँग कुनै शिर्षक दिमाकमा आएन् । सायद मनमा धेरै कुराले ठाँउ लिएर भए पनि होला ।
त्यसैले साँचे संधै कुनै विषय नै खोजेर लेख्ने म आज लाग्यो मन कै आवाज सुनु । मन कै भावना शब्दमा कोरुँ । यो मनले एकान्त खोज्छ । जब मनले एकान्त पाउँछ अनि एकाग्र हुन्छ । एकान्त पाएर एकाग्र भएको मनका भावनाहरु सुमुद्रको छाल झै तटको बालुवा सुमसुम्याउन आईपुग्छन् ।
विश्व महाकारीको रुपमा फैलिएको नोबेले कोरोना भाईरसले सबैलाई भौतिक रुपमा टाढा बनाएको छ । तर मनले भने झनै नजिक हुन खोजेको छ । मौलिक चाहाना र ईच्छालाई कुन्ठीत पाररै भएपनि महामारीको जोखिमबाट बच्न हामी अलगै बस्न बाध्य छौँ ।
मलाई एक्लो बनाएको यो १ बन्द कोठाको पिडा म भन्न चाहन्छु । मेरो पिडा , मेरो सपना, मेरा दुः ख क्या मज्जासँग हावापानी झैँ कहिले मेरो दुस्मन भयो थाहा छैन मलाई ।तिमी कति राम्रो र प्यारो छौँ हैं ? के तिमीले मलाई बुझेको छौँ ? के तिमीले मलाई माया गर्छु भन्न सक्छौं?
मन शरीरको भित्रको त्यो अदृश्य भाग हो जसबाट विचारको उत्पत्ति हुन्छ। यो मस्तिष्कको कार्यशक्तिको द्योतक हो। यो कार्यशक्ति धेरै तरिकाको हुन्छ, जस्तै चिन्तन शक्ति, स्मरण(शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इन्द्रियाग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान (अंतर्दृष्टि), इत्यादि।
म् छ ु। मभित्र मन छ । तर मनभित्र म छु कि छैन ? खै कुन्नि ! मनलाई बुझ्न यति सजिलो कहाँ छ र? झन् यसभित्रको सत्यसँग साक्षात्कार हुनु त बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा कम कहाँ होला ! रहस्यको पत्रैपत्रभित्र खप्टिएको मन जति खोल्य। मैंले तिमीलाई न बिझ्को हो कि क्या हो ? मन तिमीमा मेरो संसार पाउछु, मन म तिमीलाई मात्रै प्रम गर्छु। चिसो चिसो हावामा , तातो तातो चिया पिउनु र तिमीसँग गफगाफ गर्ने मन छ मलाई । के, यो संसारका मान्छेहरू हाम्रो प्रमलाई बुझ्छन् त ?
हावा हो- यो संसारका मान्छेहरू हावा जस्तै छन् , मलाई तिम्रो भएको काहाँ देख्न सक्छन् त , आफ्नो कुरा , आफ्नो मन पर्ने कुरा तिमी सामु गर्नेु छ।
हावा, पानी, आगो र चट्याङ ज-जस्तो भएतापनि तिमी कहिले मबाट टाढा भएनौँ। मनलागेको कुरा आज तलाइ भन्छु भनेको त , मान्छेहरूको डरले भन्नपनि सकेको छैन्।
माफ , गरदे ल ,मेरो मन । ऐ मन , आज एक्लै छु र त , तिमी मसँग छौँ । मेरा धेरै कुराहरु मैंले कसैलाई भनेको छैन्, सायद यो तिमीले मात्र बोझ्न सक्छौं होला , किन भने तिम्रो र मेरो साथ हजारौं जुनीसम्मको हो। ए , मन साच्चै तिमी सन्चै त , छौँ नि? कि तिमीपनि म जस्तै मान्छेका झुटा आशाले आफैंमा मर्दै गएको छौँ। अरे यार , मान्छेहरूको त काम नै त्यस्तै हो , कसैलाई राम्रो भएकोका हर्न सक्छन् त , तर ऐ मन तिमी दुःख नमानेर बस्नु ल!
आफैँमा खुम्चिएर नबस्नु , म के गर्छु र के म त्यो कार्य गर्न सक्छु भन्नु ल। समय र परिस्थिति अनुसार मन र मस्तिष्क सबै भावुक हुँदै जान्छ , सोच बदलिन्छन् , आफ्नो सपना साकार पार्ने मोड पनि बदलिन्छन ।जीवनका विभिन्न कालखण्डमा मानिसहरूले गरेका भिन्नभिन्न अनुभूतिका आधारमा सफलताको अर्थ पनि भिन्दाभिन्दै हुने गरेको हामीले सुनेका छौं, अनुभव गरेका छौं । कसैका लागि नाम कमाउनु सफलता हो भने कसैका लागि पैसा कमाउनु त कसैका लागि प्रतिष्ठा कमाउनु ।
एउटा विद्यार्थीका लागि परीक्षामा प्रथम हुनु सफलता हो भने खेलाडीका खेल जित्नु । नेताका लागि चुनाव जित्नु सफलता होला, प्रेमी(प्रेमिकाका लागि मन जित्नु या विश्वास जित्नु‘ आदि । साधारणतया कसैले गरेको प्रयास सार्थक हुनु भनेको र आफ्नो गल्ती मान्नुपर्छ है ऐ मन !
कल्पना गर्नुस्,म मनसँग बल्दै गरेको अरूले देखे के भन्नु होला ? हेर्दै जा मन एकदिन म पनि सफलता प्राप्त गरेको एक युवा , एक असल नारी भएर यो देशलाई सबैका सामु आइपुग्ने छु।
अन्त्यतिर , मलाई बुझ्ने भनेको नै मेरो मनले हो , तपाईं एक्लो हुँदा सधैं भरी आफ्नो मनलाई याद गर्नुहोस् , अनि हेर्नुस मनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा आगडि बढ्ने उदाहारण सबैले बुझ्ने छन ्। मनभन्दा सानो शब्द होला , तर मनसँग जोडिएको मेरो नाता धेरै नै अमुल्य छ ।